January 6, 2020 – Warmae.com
Archives: January 2020
kantkawphyu food house
, 11:09 am
, article, Article, Coffee, Myanmar Traditional Foods, Warmae Review
ဒီတစ်ခေါက်မှာ ဘောက်ထော်ဘက်က ဈေးနှုန်းသက်သာပြီးအစားအသောက်ကောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ ဆိုင်ကအရမ်းမကြီးပေမယ့် သပ်သပ်ရပ်ရပ် သန့်သန့်ရှင်းရှင်းလေးတဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ကံ့ကော်ဖြု Food House ပါ။
ဆိုင်ကိုရောက်ရောက်ချင်းမှာ သုံးဆောင်ဖို့ချပေးတဲ့ Detox Water နဲ့ လက်ဘက်ရည်ကြမ်းကို အတော်လေးသဘောကျမိတယ်။ စားဖြစ်ခဲ့တာကတော့ ပုန်းရည်ကြီးထမင်းသုပ်နဲ့ ကြက်အူခြောင်းပါ။ ဆီအရမ်းမများပဲ စားရတာအရသာကောင်းတဲ့ ဟင်းပွဲလေးတစ်ခုပေါ့။
နောက်ထပ်စားချင်နေတဲ့ ပဲပြားအစာသွပ်ကိုလည်း သဘောကျတယ်။ ခပ်ချဉ်ချဉ်အရသာလေးနဲ့ ပုန်းရည်ကြီးထမင်းနဲ့ တွဲစားခဲ့တယ်။ တစ်ပွဲကို အစာသွပ် ၄ ခုပါပြီး ၁၀၀၀ ကျပ်ပဲကျပါတယ်။
အချိုပွဲအနေနဲ့ကတော့ ကံ့ကော်ဖြူကော်ဖီသောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကော်ဖီဖျော်စက်နဲ့ သေချာဖျော်ထားတာဖြစ်ပြီး ကော်ဖီကို အရသာခံသောက်တဲ့သူတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။
ဆိုင်အပြင်ဆင်ပုံစံလေးကလည်း ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး ကျွန်တော်သွားထိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ လူရှင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်မှာ မြန်မာလူမျိုးတွေအစားများလေ့ရှိတဲ့ အစားအသောက်တွေအစုံအလင်ရပြီး နံနက်စာအတွက်တော့ ဒီဆိုင်လေးကို ညွှန်းချင်ပါတယ်။
Ah Wai Yar Street
12, Bauk Htaw,Yankin.
Phone :09 40445 5234
Email : No Email
find your next favorite restaurant
Select area Yangon Yangon
Select cuisine Chinese Thai
© 2019 – Warmae.com. All rights reserved.